SOMALITALK.COM: TAARIIKHDA CABDULLAAHI YUUSUF
ISREEB-REEBKII DOORASHADII DFKMG ee 2004
Cabdulaahi Yuusuf Axmad waxaa uu leeyahay afar caruur ah (Laba wiil iyo Laba Gabdhood) oo ku noolyihiin dalka Kanada iyo marwo.
[DGPL waxaa madaxweyna ka soo noqday C/laahi Yusuf Axmed (1998-2004), Maxamed Cabdi Xaashi (2004-2005), iyo Maxamuud Muuse Xirsi "Gen. Cadde" (2005-ilaa hadda)].
TIXRAAC::: QORMADII XAGAR-YARE (SOMALITALK.COM) EE:: WAA KUMA CABDULLAAHI YUUSUF?
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 25, 2008
Dhacdooyin Kooban ee Soomaaliya:
June 2006- ayaa Maxkamaduha Islaamigu waxay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen Muqdisho.
December 28, 2006 - ayaa maxkamaduhu ka baxeen Muqdisho, maarkaas oo Itoobiya gashay caasimada Soomaaliya markii ugu horeysey taariikhda Soomaalida oo muddo dheer colaadi ka dhaxaysey.
January 8, 2007- ayaa C/laahi Yuusuf waxa uu markii ugu horeysey Muqdisho ka degey ilaa marki la doortay October 2004.
August 30, 2007 - ayaa Muqdisho waxaa lagu qabtay kulkan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen beelo badan Soomaaliyeed, kulaankaas oo loogu yeeray dib u heshiisiin beeleed ayaan dhalin maxsuul.
March 26, 2008 - ayaa markale dagaalyahano ka tirsanaa Maxkamaduhu ay qabsadeen Jawhar oo la ollog ah Muqdisho.
August 18, 2008 - ayaa Jabuuti waxaa heshiis ku dhex maray qaar ka tirsan maxkamadihii iyo DFKMG, in kasta oo qaar kale ku gacan sayreen heshiiskaas..
August 22, 2008 - ayaa Koox ka tirsanaa Maxkamadihii ama/iyo Al-Shabaab ay qabsadeen magaalada dekedda ah ee Kismaayo, kaddib markii uu halkaas ka dhacay dagaal dad badani ku dhinteen.
November 12, 2008 - ayaa magaalada Marka waxay ka baxday gacanta DFKMG..
November 14, 2008- ayaa Al-Shabaab waxay la wareegeen Siinka-Dheer iyo Ceelasha oo Muqdisho u jira 15 Km. Markaasna C/laahi Yuusuf waxa uu qiray in kooxaha ka soo horjeeda ay gacanta ku hayaan badanaa Soomaaliya, isagoo muujiyey in ay dsuurtagal tahay in xukuumaada DFKMG ay afka ciida la geli karto.
November 28, 2008 - ayaa Itoobiya sheegtay in ay la baxayso Ciidamadeeda ku jira Soomaaliya.
December 10, 2008 - ayaa markii ugu horeyey (ilaa markii laga cayriyey) waxaa Muqdisho ku laabtay Sh. Shariif Sh. Axmed oo warbaahintu ugu yeraan Islaamiyiinta aan mayalka adkayn. (Waxaana la sheegay in wixii ka dambeeyey cayrintii Maxkamadaha ee Muqdisho ay Soomaaliya ku dhinteen dad tiradoodu gaareyso ilaa 16,210 qof, sida ay werisey Reuters.)
December 14, 2008- ayaa C/laahi Yuusuf waxa uu sheegay in uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha DFKMG, Nuur Cadde, isaga oo u cuskaday in xukuumaddiisu ku guul daraysatay wax ka qabashada ammaanka dalka. Maalintii xigtey ayaa waxaa la sheegay in barlamaanka DFKMG ee Baydhabo ay xilka ku celiyeen Nuur Cadde, in kasta oo filim laga duubay muujinayey buuq iyo sawaxan in uu kulankaasi ku dhammaaday (daawo....)
December 16, 2008 - ayaa C/laahi Yuusuf waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Gacma Dheere.
December 24, 2008 - ayaa Gacma Dheere waxa uu shir jaraa'id (Baydhabo) ka shegay in uu iska casiley xilkii ra'iisul wasaare. Isla markaas waxaa soo baxay in C/laahi Yusuf afhayeenkiisu uu sheegay in madaxweynaha DFKMG uu is casilayo December 27, 2008.
Akhri Taariikhda Soomaaliya